Juventus oo Kooxaha Man United iyo Liverpool kula soo biirtay tartanka loogu jiro saxiixa Raul Jimenez – Gool FM
(Turin) 26 Maajo 2020. Kooxda kubadda cagta Juventus ayaa lagu soo warramayaa inay ku biirtay kooxaha Man United iyo Liverpool tartanka loogu jiro weeraryahanka Wolverhampton Wanderers ee Raul Jimenez.
Xiddiga reer Mexico ayaa ku riyaaqay olole kale oo heer sare ah ee horyaalka Premier League, isagoo dhaliyay 13 gool xilli ciyaareedkii 2019-20, wuxuuna ka soo muuqday sagaal kulan kal ciyaareedkan.
Man United iyo Liverpool ayaa la sheegay inay ka mid yihiin naadiyada Ingiriiska ee raadinaya Jimenez, kaasoo Wolves ay ku qiimeyso 57 milyan oo gini, Tuttosport ayaana soo jeedinaysa in Juve ay sidoo kale baadi goobeyso saxiixa xiddigan.
Juventus ayaa lagu xamanayaa inay ku dhowdahay inay la soo saxiixato xiddiga Napoli ee Arkadiusz Milik, laakiin isla warbixinta ayaa muujineysa in kooxda reer Talyaani ay u aragto Jimenez inuu yahay xulashada ugu fiican ay kula lamaaneyn karaan weerarka xiddigooda Cristiano Ronaldo.
Jimenez ayaa la rumeysan yahay inuu sanadkii mushaar u helayo 2.23 milyan oo gini, taasoo Juventus ay awood u leedahay inay isbarbardhigaan ama ay ka fiican tahay inay la soo wareegaan 29-sano jirkaan.
Kooxda Real Madrid oo ku soo biirtay tartanka saxiixa da'yarkii hore ee Manchester City